१० प्रकारका सुन्तला र उनीहरूका लागि उत्तम के हुन्छ - PureWow - खाना
जुसिंग, स्न्याकि and र बीचमा सबैकुराका लागि संत्राका १० प्रकार
10 Types Oranges
सुन्तलाले यो सबै गर्न सक्दछ, जुस बनाएर मार्माडदेखि मरीनाडेसम्म। तर सबै सुन्तलाहरू समान बनाइने छैनन्: प्रत्येक विविधताले आफ्नै अनौंठो स्वाद र उपस्थिति समेट्छ। प्रायः वसन्त throughतु सम्म ढिलो शरद fromतुमा मौसममा प्रत्येक प्रकारको सुन्तलाको आफ्नै विशेष शक्ति हुन्छ, चाहे पकाउन, जुसिंग गर्न वा सिधा बाहिर बाहिरै मासु खाँदा राम्रो हुन्छ। यहाँ দশ पटक सुन्तलाका लोकप्रिय प्रकारहरू छन् कि अर्को पटक तपाईं किराना स्टोर वा किसान बजारमा हुँदा खरीदको विचार गर्नुहोस्। (ओह, र केवल रेकर्डको लागि, संतरे कोठाको तापक्रममा राख्न सकिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई रेफ्रिजरेटिंगले उनीहरूको शेल्फको आयु विस्तार गर्दछ - निश्चित गर्नुहोस् द्रुतशीतन पछि कोठाको तापक्रममा आउन दिनुहोस् ताकि तिनीहरूले आफ्नो रस फिर्ता पाउन्।)
सम्बन्धित: बेकि forका लागि Best सर्वश्रेष्ठ सेबहरू, हनीक्रिप्सदेखि ब्रेबर्नसम्म
गोमेज डेभिड / गेट्टी छविहरू
१ नाभी सुन्तला
यी मिठाई, थोरै तीतो सुन्तलाहरू सबैका सब भन्दा सामान्य प्रकारका हुन्छन्। तपाईलाई नाभि सुन्तला रंगले चिन्छ जब तपाइँले एउटा देख्नुहुन्छ, तल यसको हस्ताक्षर चिह्नको लागि धन्यवाद छ जुन बेली बटनसँग मिल्दोजुल्दो छ। तिनीहरूको आमन्त्रित स्वाद र बीजको अभावको कारण, नाभी सुन्तला कच्चा मा स्नैकिंग वा सलाद मा थप्न को लागी एक उत्तम पिक हो। जब सम्म तपाईं यसलाई तुरुन्त पिउन जानुहुन्छ, तिनीहरूको मिठासले तिनीहरूलाई ज्यूसिंगको लागि पनि उत्कृष्ट बनाउँछ। तपाईं बेकिंगमा टेस्टको स्वाद उज्यालो बनाउन चाँडो रोटी वा मफिनहरू बनाउने जस्ता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नाभी सुन्तला नोभेम्बर देखि जुन को मौसम मा हो, त्यसैले फल सलाद देखि ग्रिल माछा वर्ष भर मा कुनै पनि नुस्खा मा समावेश गर्न स्वतन्त्र महसुस।
काेशिस गर: सुन्तला र स्विस चार्टको साथ पान फ्राइड कोड
छविबेबर / गेट्टी छविहरू
२ कसरी सुन्तलाहरू
यस प्रकारको नाभि सुन्तला अतिरिक्त मिठो छ। कारा कारा नारंगी तिनीहरूको कम एसिडिटी र स्फूर्तिदायी मिठासको लागि प्रसिद्ध छ , जो उनीहरुलाई खाजा, कच्चा पकवान र रस को लागी प्रधान बनाउँछ। (तिनीहरूसँग न्यूनतम बीज पनि हुन्छ।) यसलाई रातो-झुम्काएको नाभिक सुन्तला पनि भनिन्छ (तिनीहरूको शरीरको प्राकृतिक क्यारोटेनोइड पिगमेन्टको कारण गहिरो रंग हुन्छ), कारा कारा रगतको सुन्तला र नाभी सुन्तलाको बीचको क्रस जस्तो छ। यसको जामुनको स्वाद छ यसको जामुन र चेरीको स with्केतको साथ। तिनीहरू मूल रूपमा भेनेजुएलाका हुन्, तर अब तिनीहरू डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म क्यालिफोर्नियामा बढेका छन्।
काेशिस गर: बेक्ल फिटा डिल, क्यापर बेरी र सिट्रसको साथ
मिगुएल सोटोमायर / गेट्टी छविहरू
V. भ्यालेन्सिया सुन्तला
यदि तपाईंसँग नयाँ ठाउँहरू ताजा-निचोड गरिएको OJ मा सेट गरिएको छ भने, मीठो भ्यालेन्सिया सुन्तला भन्दा बढि नहेर्नुहोस्। तिनीहरूसँग पातलो छाला र एक टन रस छ यसको मतलब, तपाई आफ्नो पैसाको लागि सब भन्दा धमाधडी पाउनुहुनेछ जब यो ताजा गिलास बनाउनको लागि आउँदछ। तपाईं तीनिहरू कच्चा मासु गर्न सक्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईं बीउहरूको लागि आँखा राख्नुहुन्छ। यसको स्प्यानिश नामको बावजुद, भ्यालेन्सिया सुन्तला क्यालिफोर्नियामा १ mid०० को मध्यमा सिर्जना गरिएको थियो; तिनीहरू फ्लोरिडामा हुर्किए पनि। अन्य लोकप्रिय प्रजातिहरू भन्दा फरक, तिनीहरू अधिकांता ग्रीसमा मार्च देखि जुलाई सम्म खेती गरिन्छ। भ्यालेन्सिया सुन्तलाको रस प्रयोग गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई सलाद वा एकलको रूपमा कच्चा खानका लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
काेशिस गर: भुनी बीट र सिट्रस सलाद
पीजे टेलर / गेट्टी छवि द्वारा फोटो
Blood. रक्त संत्र
अह, र orange नारंगी: कुनै जाडो पनीर बोर्ड वा छुट्टी मिठाई स्प्रेड बिना यो पूर्ण हुँदैन। उनीहरूको मासुको गहिरो रातो र from्गबाट ​​उनीहरूको नाम प्राप्त हुन्छ, जुन सुपर रसिलो, मिठाई र टार्ट हो। तिनीहरूको स्वाद अनौंठो छ, यस प्रकारको टार्ट सुन्तला जस्ता मसालेको साथ, पाकेको रास्पबेरी। त्यहाँ तीन मुख्य प्रकारहरू हुन्छन् — मोरो, सuine्ग्रेलो र टारोको art जुन क्रमशः टार्टदेखि मिठोसम्म हुन्छ। यो तिनीहरूलाई बनाउँछ डेसर्ट वा सॉसमा तारकीय थप, प्लस मुरब्बाको लागि उत्तम बेस। तिनीहरूलाई रस पनि वा कच्चा खान सकिन्छ। र o्ग सुन्तला हिउँदको माध्यमबाट ढिलो गिरावटदेखि (नोभेम्बरदेखि मार्च सम्म) व्यापक रूपमा उपलब्ध हुन्छन्।
काेशिस गर: रक्त सुन्तला इटन मेस
एड्रियन पोप / गेट्टी छविहरू
Se. सेभिल ओरन्ज
यी भूमध्य फलहरूलाई एक कारणका लागि खट्टा सुन्तला पनि भनिन्छ। सेभिल सुन्तला न्यूनतम मीठा र tartness र तीतोपन मा ठूलो छ। यसले उनीहरूलाई मुरब्बाको लागि उत्तम छनौट बनाउँदछ, किनकि उनीहरू आफैले आफ्नो बिरुवा राख्न सक्छन् र चिनीको पर्याप्त मात्रामा थप गर्न सकिन्छ जुन थप्न आवश्यक छ। सुन्तला र यसको पिलहरू मसलाको स्वादका लागि पनि उत्कृष्ट छन्। किनभने तिनीहरू धेरै अम्लीय छन्, तिनीहरूलाई सामान्यतया कच्चा रमाइलो हुँदैन। यदि तपाईं केही सेभिल सुन्तलामा आफ्ना हातहरू पाउन सक्नुहुनेछ जब तिनीहरू डिसेम्बर देखि फेब्रुअरीसम्म मौसममा छन्, तिनीहरूलाई माछा वा पोर्क मारीनेड्स, जेली र मर्मिलाड्स, सॉस, सलाद ड्रेसिंग वा मीठा ककटेलमा प्रयोग गर्नुहोस्।
काेशिस गर: क्रैनबेरी ऑरेंज मर्मलाडे
L. लिमा सुन्तला
यदि तपाईंले यो ब्राजिलियन रत्नलाई उत्पादन खण्डमा देख्नुभयो भने उनीहरू हराउनुभन्दा पहिले केही स्कूप गर्नुहोस्। दक्षिण अमेरिका र भूमध्यसागरमा साधारण, लिमा सुन्तलालाई एसिडलेस सुन्तला पनि भनिन्छ किनकि तिनीहरू न्यूनतम अम्लता वा tartness संग सुपर मिठाई छन्। तिनीहरूसँग बाक्ला खोर्साहरू र केहि बीउ छन्, तर तिनीहरू नरम, कोमल बनावट र फरक जुसीपनको कारण कच्चामा स्नैक्सिंगको लागि उत्कृष्ट छ। लिमा सुन्तला को एक मात्र नकारात्मक पक्ष भनेको तिनीहरूको एसिडिटीको अभावले उनीहरूलाई छोटो शेल्फ लाइफ पनि दिन्छ। त्यसोभए, तिनीहरूलाई कच्चा रमाइलो गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई रसमा निचोरेर ASAP लिप्त गर्नुहोस्। तपाइँ भर्खरको भाग्यशाली हुन सक्नुहुनेछ उनीहरूलाई ढिलो जाडोदेखि वसन्तको शुरुमा।
काेशिस गर: Caramelized प्याज र सौंफ संग स्टिकी ओरेन्ज चिकन
क्याथरिन फल्स वाणिज्यिक / गेट्टी छविहरू
Mandarin. मन्डारिन सुन्तला रंग
यहाँ चीज छ: जे होस् अक्सर यसलाई मन्डारिन सुन्तलाको रूपमा पनि चिनिन्छ, म्यान्डारिन प्राविधिक रूपमा छैन सुन्तला मा सबै । मन्डारिन सुन्तला सिट्रस फलहरूको समूह हो जुन छालाको छाला हुन्छ, सानो आकारको हुन्छ र केही चपटा हुन्छ। सुन्तला वास्तवमा मन्डारिन र पोमलोसको हाइब्रिडहरू हुन् (जुन ग्रेपफ्रुटसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर कम तीतो हुन्छ)। मन्डारिनहरू स-सजिलो-छालाको छालाको साथ सानो र मीठो हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई लोकप्रिय सलाद टपर र स्नैक्स बनाउँदछ। तिनीहरू पकाउनको लागि पनि उत्कृष्ट छन् किनकि तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा बीउरहित छन्। ताजा मन्डारिनहरू जनवरीदेखि मेसम्म मौसममा हुन्छन्, तर तिनीहरू सामान्य रूपमा डिब्बाबंद फेला पारिएका छन् र वर्षभर उपभोगका लागि सिरपमा प्याक गरिएका छन्।
काेशिस गर: सुन्तला र चकलेट Brioche Tarts
भर्दिना अन्ना / गेट्टी छविहरू
जबकि तिनीहरू प्राय: समान परिवारमा एकैचोटि हुन्छन्, ट्याger्गेरिन र संतरे दुई भिन्न प्रकारका सिट्रस हुन्। ट्यान्जाइन प्राविधिक रूपमा म्यान्डारिनको प्रकारको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, र तिनीहरू क्लेमेन्टाइनको नजिकको आफन्त हो । (ती दुई बिचको मुख्य भिन्नता भनेको क्लेमेन्टाइनहरू मूलत: बीजविहीन हुन्छन् जबकि ट्यान्जाइन हुँदैन।) सामान्यतया, सुन्तला टन्जेरीनभन्दा ठूला र दागदार हुन्छन्, जुन सानो, मीठो र खुलिलोसँग सजीलो हुन्छ, जसले रस, नाश्ता, पकाउनको लागि उत्कृष्ट बनाउँछ। , पेय र सलाद। तिनीहरूले नोभेम्बर देखि मई को बीच एक धेरै लामो मौसम छ, त्यसैले तपाईं को लागी धेरै गर्न को लागी धेरै गर्न को लागी उनीहरू उत्तम हो जबकि।
काेशिस गर: सभोय गोभी, टन्जेरीन र कालो मूली सलाद
मारेन शीतकालीन / EyeEm / गेट्टी छविहरू
तिनीहरू साना, बिउ रहित, मीठो र डाउनराइट प्यारा छन्। यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि सबैजनाले यसलाई उज्यालो खाजाको समयमा लिने मेक-अपको लागि प्याक गर्न मन पराउँछन्। ट्या tan्गेरिन जस्तै, क्लेमेन्टाइनहरू बोक्रा बनाउन र खान सजिलो हुन्छ , उनीहरूको सानो भागलाई धन्यवाद। क्लेमेन्टाइन प्राविधिक रूपमा ट्याang्गर हो, जुन एक विलोफ मन्डारिन सुन्तला र मीठो सुन्तलाको बीचको क्रस हो - त्यसैले उनीहरूसँग त्यस्तै अनौंठो, महजस्तो मिठास र कम अम्लता छ। तिनीहरू छुनको लागि चिंचो छन् किनकि उनीहरूको छाला र न्यूनतम पिठको कारणले गर्दा कच्चामा खाजा लिने, बेकि or वा सलादमा थपेकोमा उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाउँदछ। तिनीहरूको चरम सीजन नोभेम्बरदेखि जनवरीसम्म हुन्छ।
काेशिस गर: साइट्रस, झींगा र फेटाको साथ Quinoa सलाद
tpzijl / गेट्टी छविहरू
ठीक छ, नजिकबाट पछ्याउनुहोस्: यदि एक सुन्तला, परिभाषा अनुसार, मन्दारिन र पोमेलोको संकर हो, र ट्यान्जेलो ट्या tan्गेरिन (जुन म्यान्डारिनको एक प्रकार हो) र एक पोमेलोको संकर हो, तब ट्याge्गलो * मूलतः * हो एक सुपर विशेष सुन्तला ... सही? टंगेलोससँग एउटा उल्लेखनीय निप्पल हुन्छ जसले तिनीहरूलाई अन्य सिट्रस फलहरू भन्दा अलग गर्दछ। तिनीहरूको छाला कडा छ र छील गर्न गाह्रो छ, तर भित्रको मासु सुपर रसिलो, तीखो र मीठो छ। त्यसोभए, तिनीहरू कच्चा खान कडा हुन सक्छ, तिनीहरूले रसको एक हत्यारा गिलास बनाउन। तिनीहरू मन्दारिन सुन्तला र मिठो सुन्तलाको विकल्पको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूको लागि डिसेम्बर देखि मार्च सम्म नजर राख्नुहोस्।
काेशिस गर: टंगेलो ग्रेनिटा
सम्बन्धित: के सुन्तला फ्रिजमा राख्नु पर्छ? हामी सत्य बाहिर निस्के
सबै समय रोमान्टिक चलचित्रहरू
महिलाको लागी विभिन्न हेयरकट
सिंह राशि संगतता लिओ राशि
घुम्रेको कपालको लागि बन कपाल
कसरी टाउको स्कार्फ लगाउने